China GrowBetter Roa mifarana CMH 630W jiro Greenhouse Jiro ny trano sy ny orinasa | RIKO
Ny rafitra jiro roa mifototra GROWBETTER dia rafi-jiro horticultural avo lenta izay safidy tsara indrindra ho an'ny karazana fampiharana maro. Mampifangaro reflekona fitaratra roa mifampitohy miaraka amin'ny ballast-wattage miovaova ary jiro avo-PAR DE Ceramic Metal Halide mitombo.
Ny rafitra jiro roa mifototra GROWBETTER dia rafi-jiro horticultural avo lenta izay safidy tsara indrindra ho an'ny karazana fampiharana maro. Mampifangaro reflekona fitaratra roa mifampitohy miaraka amin'ny ballast-wattage miovaova ary jiro avo-PAR DE Ceramic Metal Halide mitombo. Ity rafitra matihanina haingam-barotra matanjaka sy saro-pianarana ity dia ahafahan'ny mpampiasa misafidy ireo haavo hazavana ilaina indrindra amin'ny hazavana ho an'ny fananganana azy ireo.
Ity reflektrafitra endrika endrika mifamatotra ity dia vita avy amin'ny vera famolavolana fakana sary famandrihana multifaceted ary manome ny vokatra azo avy any ambany izay manamafy ny haingam-pahazavana. Manome hazavana tsara sy saro-pantarina tsara izy io, ka izany no taratra ho an'ny fampiharana maro. Ny ballast dia ahitana ny kalitao fanamboarana kalitao miady amin'ny halatra sy ny fikajiana marobe ary ny famoahana wattage miovaova izay manome safidy marobe amin'ny 315W ka hatramin'ny 630W mampiasa 630W DE jiro.
• Ny tahan'ny taratra avo lenta noho ny teknolojia coating anatiny dia mampitombo ny fahazavana mahomby amin'ny voly.
• Famolavolana optika tokana mifototra amin'ny taratra fitaratra, na dia fizarana maivana aza.
• Feno frezy digital dimmable, mora kokoa sy kalitao maharitra.
• Fitaovana famokarana vy halide metaly kristaly avoakan'ny par PAR, manome ny marindrano feno indrindra avy amin'ny UV mankany IR.
• Tsy misy olana oksizenina raha oharina amin'ny tariby aluminium.
Dimming Fanaraha-maso ny fanamoriana50% - 60% - 70% - 80% - 90% -100%
Bsy Angle 98 ° x103 °
Li Source 2-pin Ceramic Metal Halide (CMH) 630W
Color Suhu 3000K, 4200K
Dimension 464 * 230 * 90mm / 5.3kg
Packaging 52 x 29 x 17CM / 1pcs isaky ny baoritra / 6.2kgs
Trano maitso lehibe, trano lehibe mitombo ao anatiny, mitombo lay.
Ny zava-maniry, ny legioma, ny zavamaniry, ny zavamaniry maintso, ny zavamaniry maintso, ny voankazo, ny sakam-pitsaboana.
Fampiharana momba ny fambolena, Hortikultura, Floriculture sns.
Previous: Fiovana fanamorana hazavana CMH / LEC 315W 500W
Manaraka: 315W Seramika metaly Halide Digital Ballast
Tariby hitondrana, Jiro fitomboan'ny fambolena, Uv Lamp For Plants, Jiro mitombo, Jiro anatiny, Arotsaha fanaovan-jiro ho an'ny zavamaniry anatiny,